Mandehana mankany Vietnam - Soraty ireo toro-hevitra fototra sy ilaina | Vaovao momba ny dia
Soraty ireto torohevitra ireto raha handeha ho any Vietnam ianao na tsy misy visa
Nieritreritra ianao mandeha any Vietnam? Avy eo ianao dia mety hotolorana fanontaniana toy ny hoe mila visa ianao na vaksinina manokana sy maro hafa, izay mety hiteraka ahiahy aminay. Noho io antony io dia tsy misy na inona na inona toy ny andiana toro-hevitra fototra, mba hahafahanao miala sasatra sy mankafy ny dia mahafinaritra ataonao.
Matetika no misy ny fisalasalana rehefa manangona sy mandeha isika Ny ilany an'izao tontolo izao. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manazava ny zava-drehetra ary avelao hamatotra azy, alohan'ny hirosoana amin'ny traikefa nahafinaritra vaovao. Vietnam no fanirian'ireo mpizahatany maro ary tsy gaga izahay. Te hahalala ho anao manokana ve ianao?
1 Mila visa ve aho vao afaka mankany Vietnam?
2 Fepetra ilaina amin'ny fikirakirana ny visa
3 Vaksiny alohan'ny handehanana any Vietnam
4 Afaka mangataka visa amin'ny Internet ve aho?
5 Mialà fiantohana amin'ny dia hatrany
6 Misafidiana kitapo
7 Vola any Vietnam
Mila visa ve aho vao afaka mankany Vietnam?
Iray amin'ireo fisalasalana matetika indrindra io ary tsy mahagaga izany. Aza hadino anefa fa raha manana ianao pasipaoro espaniola ary ny fijanonanao any amin'io firenena io dia latsaky ny 15 andro, dia tsy mila izany ianao mangataka visa Vietnam. Raha mihoatra ireo andro voalaza ireo ianao dia manana fomba maoderina maromaro. Amin'ny lafiny iray, ny iray ho an'ny fijanonana iray volana izay manan-kery na ho an'ny seranam-piara-manidina na ho an'ny karazana sisintany hafa, fa ny safidy hafa kosa dia ho an'ny fijanonana telo volana. Amin'ity tranga ity dia ho an'ny seranam-piaramanidina ihany no hampiharina.
Fepetra ilaina amin'ny fikirakirana ny visa
Tokony hotadidintsika foana fa ny firenena tsirairay dia mety manana ny takiny manokana. Noho izany, tsy azo atao ankapobeny izany ary mety kokoa raha mitady ny fampahalalana hatrany ao amin'ny tranonkalan'ny masoivohon'i Vietnam ao amin'ny firenentsika. Satria, ohatra, ho an'i Arzantina dia tsy maintsy mahazo visa, nefa miaraka Zom-pirenena Italiana Eny, afaka mandray anao amin'ny fotoana mitovy izy amin'ny pasipaoro Espaniôla ary miditra tsy misy visa mandritra ny 15 andro. Fantaro izany, tadidio fa amin'ny maha-fepetra takiana antsika dia mila pasipaoro vao farafaharatsiny 6 volana isika. Hofenoinay ihany koa ny takelaka nomen'ny masoivoho ary halefa sary misy karazana pasipaoro. Azonao atao koa ny mangataka famandrihana amin'ny toeram-ponenana itodiana ary tsy voaroaka avy any Vietnam tato anatin'ny telo taona.
Vaksiny alohan'ny handehanana any Vietnam
Raha efa manana ny visa ianao, raha ilaina ary tena te-hivezivezy ianao dia tokony ho fantatrao fa tsy misy vaksiny tsy maintsy atao. Fa toy ny mitranga matetika dia misy ny sasany izay atolotra. Anisan'izany ny tazo mavo na hépatite A ary B, ary ny tazo typhoid. Ilaina moka dia tena ilaina foana ary koa mitondra kit miaraka amina ibuprofen sasany, raha ilaina izany.
Afaka mangataka visa amin'ny Internet ve aho?
Androany, amin'ny alàlan'ny Internet ananantsika dia tsotra kokoa ny zava-drehetra. Noho izany, efa misy izy ireo pejy web hanodinana ity fomba ity. Azonao atao izany 24 ora isan'andro, noho ny fangatahana nomerika. Ao amin'izy ireo no hanoratanao ny angon-drakitrao sy handoavana ny vola takiana. Mazava ho azy, raha mahafeno ny fepetra takiana ianao, satria raha te-ho any amin'ny firenena mandritra ny iray volana mahery ianao dia tsy maintsy mankany amin'ny ambasady.
Mialà fiantohana amin'ny dia hatrany
Marina fa ny teboka sasany dia mila mazava tsara alohan'ny dia. Iray amin'izany ny Fepetra takiana visa any Vietnam ary iray hafa, mba hialana fiantohana amin'ny dia. Satria tsy fantatsika velively izay mety hitranga mandritra na mandritra izany. Araka ny eritreritsika tsara dia lafo ny olan'ny dokotera sy ny fahasalamana any amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao. Hiharan'izany ve isika? Ny zavatra tsara indrindra dia tsy.
Marina fa efa zatra valizy isika, fa ny tena izy dia ho mahazo aina kokoa ity dia mankany Vietnam ity raha mamela kitapo kitapo kitapo isika. Araka ny tsy mora foana ny mitondra valizy eny an-dalambe. Mazava ho azy fa izany rehetra izany dia hatrany amin'ny tsiron'ny mpandeha.
Vola any Vietnam
Ny volany dia ny dong, ka ny iray euro dia 27.000 dong. Ho hitanao fa be dia be ny faktiora eny an-tànanao, saingy araka ny hitantsika dia takatry ny sainy ny fiovana. Noho izany dia afaka mihinana amin'ny iray euro fotsiny ianao, amin'ny fivarotana maro izay ho hitanao. Azonao atao ny mitahiry vola amin'ny dianao mankany Vietnam. Raha hitanao fa somary sarotra ny mieritreritra fiovana, tsy misy toa ny fampiasana rindranasa finday. Manana visa hivezivezy any Vietnam ve ianao ary hamafana ireo famantarana hafa? Avy eo tonga ny fotoana hankafizana ny fialan-tsasatra mendrika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Soraty ireto torohevitra ireto raha handeha ho any Vietnam ianao na tsy misy visa
Dia an-tongotra namakivaky an'i Casablanca any Maraoka